Emira Arabo Mitambatra: Mafana Fo Iray Voasambotra Noho Ireo Bitsiny · Global Voices teny Malagasy
Emira Arabo Mitambatra: Mafana Fo Iray Voasambotra Noho Ireo Bitsiny
Voadika ny 15 Marsa 2012 0:14 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, Aymara, English
Bitsik'i Saleh Aldhaifairi tamin'ny fotoana nisamborana azy
Niaraka tamin'ny fahaterahan'ny Lohataona Arabo, toa menatry ny feo rehetra izay mitaky ny fanovana sy fanavaozana ireo manam-pahefana any Emirà Arabo Mitambatra. Ny fanombohan'izany dia tamin'ny fisamborana tsy an-drariny ireo mafana fo dimy noho ny fanasoniavan'izy ireo fanangonan-tsonia tao amin'ny aterineto ka nitanana azy ireo an-tsokosoko efa am-bolana maro talohan'ny nanomezana ‘famelan-tsazy’ azy ireo ho mariky ny fankalazana ny fetim-pirenena isan-taona. Fotoana fohy taty aoriana, nisy mafana fo ara-politika fito nalàna teny aminy ny maha-olom-pirenena azy taorian'ny baiko iray navoakan'i Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, filohan'ny Emira Arabo Mitambatra. Tato ho ato, nisy endrikana fanitsakitsahana ny fahalalahana miteny nipoitra taorian'ny fisamborana an'i Saleh AlDhufairi, Islamista iray mitaky ny fiovàna.
Tanatin'ny bitsiny farany, nanoratra i AlDhufairi (@SalehAlDhufairi) fa voasambotra tao an-tranony any Ras Al-Khaimaa ny tenany. Namoaka fanambarana ny mpitandro filaminana any Dubai manazava:
Nanambara ny Mpitondra tenin'ny Mpitandro filaminana ao Dubai fa voasambotra i Saleh Al Dhafairi noho ny fampiangana azy ho nihantsy. Araka ny fanambaran'ny Mpitandro filaminana ao Dubai, voampanga ho nihantsy i Al Dhafairi avy amin'ny alalan'ireo hevitra miparitaka amin'ny fanoratana na fitenenana izay manimba ny firaisam-pirenena na ny filaminam-bahoaka. Nanamafy io mpitondra teny io fa hatolotra ny lehiben'ny mpampanoa lalàna i Al Dhafairi aorian'ny 48 ora, ary nanipika fa ny lalàna dia manasazy ireo mpampisara-bazana. Nanampy izy fa ny zavatra nataon'ilay voampanga dia eo ambany fahefan'ny lalàna federaly.
Ho valin'izay, namoaka fanambarana manameloka ny fisamborana an'i AlDhafairi ilay vondrona Islamika Al-Islah, milaza fa tsy hanakana ny fitakian'izy ireo ireny fisamborana ireny ary tsy manaiky ny fanesorana ny maha-olom-pirenena an'ireo vahoaka na ny fisamborana azy ireo ry zareo. Nampahafantatra ny Al-Islah fa rehefa nosamborina i AlDhafairi dia nangataka ny firaketana an-tsoratra milaza ny fisamborana azy, ary ho setrin'izany, niditra an-keriny tao an-tranony ny mpitandro filaminam-bahoaka ary nisambotra azy.
13 Aogositra 2019Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana